Etu esi ese egbugbere ọnụ gị ma ọ bụ nweta afụ ọnụ ma ọ bụ afụ ọnụ na Zoom | Gam akporosis
Mbugharị aghọọla ọrụ ndị mmadụ niile amatabeghị tupu 2020, iji bụrụ ọrụ kacha mma ugbu a. Na-ekwu, ugbu a ọ na-abịa na Studio mmetụta ka animate ndị na-agwụ ike video oku na ihu anyị n'ebe ahụ n'etiti.
A-akpali nnọọ mmasị ọhụrụ iji weta ụfọdụ na-abawanye mmetụta dị adị taa ruo taa na nzukọ nzukọ ma ọ bụ naanị iso ezinụlọ ma ọ bụ ndị enyi na-emekọrịta ihe.
Ihe omuma a abughi na obu ihe puru iche na nke anyi ahughi, ebe obu na ndi ozo di ka Instagram ma obu Snapchat raara onwe ha nye ẹkedori fun nzacha na "agba" anyị ihu na anyị nwere ike ịnwe ọmarịcha oge mgbe anyị keere foto ma ọ bụ kpọọ oku vidiyo na-aga.
Mbugharị agbakwunyela Mmetụta Studio iji tinye nku anya, ntutu ihu, na nzacha agba na egbugbere ọnụ. Dabere na Verge, anyị nwere ike ịchọta ọmarịcha ọhụụ site na Mbugharị vidiyo ntọala na nhọrọ "Nzụlite na Nzacha".
Nke a ihe ọhụụ gunyere site na ntọala 3 taabụ nke nku anya, afụ ọnụ na ajị agba kọwara, na Agba Agba. Ọ dịghị mkpa ịkọwapụta ihe onye ọ bụla na-eme, ya mere, ọ bụ ihe gbasara ịnwa n'etiti nhọrọ 7 nke mbụ, nke ọzọ 7 nke abụọ na 10 dị iche iche na agba egbugbere ọnụ.
Ihe na-ato ochi bu na anyị nwere agba agba iji dozie ma ọ bụ hazie agba nke ọ bụla n'ime ihe ndị ahụ eji achọ mma maka ihu anyị maka mgbe anyị banyere oku vidiyo na Zoom; echefula ihe a Mbugharị mebere akwụkwọ ahụaja usoro.
Ewezuga ihe ekwuru, enwere ike ịkọwa mmetụta ndị a maka nnọkọ n'ọdịnihu ya mere anyị enweghị ọbụna ịrụ ọrụ ha; Bịanụ, anyị ga-abụ ọ joyụ nke ubi ahụ ma ọ bụrụ na anyị enye ya obere agba na ọchị.
Ihe ohuru bu na-ebuga site na ihe nkesa iji malite iru onye ọ bụla na Mbugharị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Esi agba egbugbere ọnụ ma ọ bụ chọọ ihu gị mma na Mbugharị: nnukwu ihe ọhụụ nke ngwa oku vidiyo